Iindaba -Amaxabiso ensimbi ayaqhubeka nokunyuka, kodwa ukunyuka kubonakala ngathi kuhamba kancinci
Amaxabiso entsimbi ayaqhubeka nokunyuka, kodwa ukunyuka kubonakala ngathi kuhamba kancinci
Njengoko amaxabiso entsimbi eqhubeka nokunyuka, isalathiso sentsimbi esenziwe ngenyanga (MMI) sentsimbi ekrwada sonyuke nge-7.8% kule nyanga.
Ngaba ukulungele uthethathethwano lwesivumelwano sentsimbi sonyaka? Qiniseka ukuba uphonononge iindlela zethu ezintlanu ezilungileyo.
Njengoko besibhale kwikholamu yale nyanga, amaxabiso entsimbi ebekhula ngokuqhubekayo ukusukela ngehlobo elidlulileyo.
Amaxabiso entsimbi anyuke ngamanani aphindwe kabini ngenyanga-ngenyanga. Nangona kunjalo, izinga lokunyuka libonakala ngathi lihlile.
Umzekelo, ixabiso lekhoyili eshushu egoliweyo eUnited States iyaqhubeka nokunyuka. Ixabiso leenyanga ezintathu lekhoyili eshushu e-United States inyuke ngama-20% ukusuka kwinyanga ephelileyo ukuya kwi-US $ 1,280 ngetoni emfutshane. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku, amaxabiso sele ethe tyaba ngo-Epreli.
Ngaba amaxabiso entsimbi ekugqibeleni afikelele encotsheni? Akucaci, kodwa ukonyuka kwamaxabiso sele kuqalile ukunciphisa.
Ukuthetha ngentengiso yokuhambisa kunye nonikezelo oluqinileyo, abathengi baya kufumana ubonelelo olutsha ngexesha elifutshane ukuya kweliphakathi, eliya kubazisela ukonwaba.
Umsebenzi uyaqhubeka kwiziko elitsha le-Steel Dynamics eSinton, eTexas, ekucwangciselwe ukuba igunyaziswe phakathi enyakeni.
Inkampani ithi ngaphandle kweendleko (iUS $ 18 yezigidi) ezinxulunyaniswa notyalo-mali kwisityalo seSinton sentsimbi, kulindeleke ukuba ingeniso yaso ihlanjululwe kwisabelo ngasinye kwikota yokuqala ukuba ibe phakathi kwe-US $ 1.94 kunye ne-US $ 1.98, enokubonisa ukwenziwa kwenkampani oku kwikota. Rekhoda umvuzo. ikhampani.
Inkampani ithi: “Ngenxa yemfuno eqinileyo eqhubeka nokuxhasa amaxabiso esinyithi, eqhutywa kukwanda kwamaxabiso esinyithi, kulindeleke ukuba ingeniso yeshishini lenkampani kwikota yokuqala ka-2021 ibe ngaphezulu kakhulu kwikota yesine ngekota iziphumo. ” Amaxabiso eemveliso zentsimbi ethe tyaba ngekota aya kunyuka kakhulu ngekota ukunciphisa ukonyuka kweendleko zetsimbi. ”
Kwiindaba zexesha elide, kwinyanga ephelileyo, uNucor wabhengeza izicwangciso zokwakha ityhubhu yokuqengqa ityhubhu kufutshane nesityalo sayo esincinci eGallatin, eKentucky.
INucor izotyala imali ephantse ifike kwi-US $ 164 yezigidi kwisityalo esitsha kwaye yathi isityalo siza kuqala ukusebenza ngo-2023.
IsiXeko saseTangshan, isiseko semveliso yentsimbi eTshayina, sithathe amanyathelo okuthintela ukuveliswa kwesinyithi ukunciphisa ungcoliseko.
Nangona kunjalo, iSouth China Morning Post ichaze ukuba imveliso yentsimbi yaseTshayina isomelele, inqanaba lokusetyenziswa komthamo we-87%.
Emva kokuwa malunga ne-US $ 750 ngetoni nganye phakathi ku-Matshi, amaxabiso e-Chinese HRC anyuka aya kwi-US $ 820 ngo-Epreli 1.
Imibutho emininzi yasekhaya icele umngeni kuMongameli wangaphambili uDonald Trump kwiCandelo lama-232 leerhafu zentsimbi kunye nealuminium kwinkqubo yenkundla.
Nangona kunjalo, imiceli mngeni kaTrump kutshanje kwirhafu yokwandiswa (kubandakanya isinyithi kunye nezinto ezenziwe ngealuminium) zibonakalise ukuba yimpumelelo kubaceli basekhaya.
Iimveliso zePrimeSource ziyakhuphisana nesibhengezo sikaTrump sikaTrump 9980 esikhutshwe ngoJanuwari 24, 2020. Isibhengezo sandise uluhlu lweerhafu zeCandelo 232 ukubandakanya izinto ezenziwe ngentsimbi kunye nealuminium.
I-USCIT icacisile: "Ukubhengeza isibhengezo 9980 asikho semthethweni, kufuneka sifumanise ukuba ngokuqinisekileyo ayilunganga imigaqo yolawulo, ukwaphulwa kwenkqubo okanye amanyathelo athathwe ngaphandle kogunyaziso." "Kuba uMongameli ukhuphe isibhengezo 9980 emva kokuba isigunyaziso seCongress silungelelanise ukungeniswa kweemveliso ezichaphazelekayo kwisibhengezo siphelelwe lixesha, Isibhengezo 9980 linyathelo elithatyathwe ngaphandle kwesigunyaziso."
Ngenxa yoko, inkundla yathi la mabango “akavumelekanga xa kusaphulwa umthetho.” Ikwacele ukubuyiselwa imali yeerhafu ezinxulumene nokubhengezwa.
Ukusukela nge-1 ka-Epreli, ixabiso lesinyithi le-China lenyuke nge-10.1% ngenyanga-ngenyanga ukuya kwi-US $ 799 ngetoni nganye. Amalahle aphekwayo e-China awile nge-11.9% ukuya kwi-US $ 348 ngetoni nganye. Kwangelo xesha, amaxabiso e-billet yase-China ehle nge-1.3% ukuya kwi-US $ 538 ngetoni nganye.
Isongezelelo sobude obulungisiweyo. Ububanzi kunye neenkcukacha zokufaka. ukutyabeka. Ngemodeli yeendleko zeMetroMiner, unokuqiniseka ngokuzithemba ngexabiso ekufuneka lihlawulwe ngesinyithi.
Ndivile ukuba i-scrap yard igcwele bazovala ngoba abanandawo
© 2021 MetalMiner Onke amalungelo agciniwe. | Ikhithi yeendaba | Useto lweMvume yeKuki | Umgaqo wabucala | Imimmisele yenkonzo
Ixesha Post: May-08-2021